कुकुर लिएर ३८ देशको ४८ हजार किलोमिटर हिडेका टम
काठमाडौँ । अमेरिकाको न्यु जर्सीमा बस्ने टम टर्किचले आफ्नो कुकुरसँग पैदल यात्रा गरी ३८ देश घुमेका छन् । सात वर्षको यात्रामा टमलाई साथ दिने कुकुर सवानाहले विश्व कीर्तिमान बनाएका छन् ।
किन हुदैछ बिल गेट्सको बायोडाटाको चर्चा ?
काठमाडौँ । जब कुनै व्यक्ति नयाँ कामको खोजीमा हुन्छ, उसको बायोडाटा कस्तो छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । काम पाउनको लागि पहिलो प्रक्रिया बायोडाटा हो र बायोडाटा हेरेपछि मात्र इच्छुक
किमको अनौठो दाबि, एलियनले कोरोना फैलायो !
काठमाडौँ । उत्तर कोरियाका तानाशाह किम जोङ उन आफ्नो अनौठो बयानका कारण चर्चामा रहन्छन् । विश्वभर चर्चा भइरहेका कोरोनाबारे किमको बयान अहिले चर्चामा रहेको छ । किम जोङले एलियनका कारण